Gụgharia - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 2)
Disney + ruru ndị debanyere aha nde 95 na ụwa dum
Onu ogugu nke Disney + na - aga n'ihu n’enweghi igbochi ma ọ dịla nde 95 nde gburugburu ụwa.
Spotify na njedebe nke iru ndị ọrụ 350 kwa ọnwa
Ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha na Spotify bụ nde mmadụ nde 155, ọ bụ ezie na ọ na-aga n'ihu ịhụ nfu.
Spotify na-ewelite ọnụahịa nke atụmatụ ezinụlọ site na otu euro
Spotify ekwuputala ịrị elu ọnụahịa na atụmatụ ezinụlọ, ịrị elu nke otu euro nke nwere ike iru atụmatụ ndị ọzọ.
Google gbanwere atụmatụ ọdịnihu maka Stadia
Google gbanwere usoro ya na Google Stadia ma lekwasị anya n'inye utu aha nke atọ karịa katalọgụ nke ya.
Agbaa ohuru ohuru nke Galaxy S21 nke Netflix gbara ka igwu egwu HDR
Ọdụ ọhụrụ ndị Netflix kwadoro iji nwee obi ụtọ na HDR bụ Galaxy S21, TCL 20 G na Oppo Reno 4 Pro
Ọrụ vidiyo vidio Paramount + ga-abata na Latin America na Machị 4
Ọrụ vidiyo ọhụrụ gụgharia ga-abata na Latin America bụ Paramount +, ọrụ ga-abata na Machị 4.
Esi gbanwee ntọala ojiji data Netflix
Ọ bụrụ na ị jiri Netflix na ngwaọrụ mkpanaka gị, anyị na-akụziri gị otu esi echekwa data sitere na onye ọrụ gị. Nkuzi di nkpa ma dikwa nkpa maka oru a.
Disney + ga-ebuli ego kwa ọnwa site na euro abụọ site na February 2021
Disney ekwuputala na ya ga ebulite ugwo onu ahia nke vidio ya site na 2 euro site na February 2021
Spotify ga-enye gị ohere igwu egwu dị na ngwaọrụ gị
The ọzọ Spotify update ga-ekwe ka ngwa na-eji dị ka a ọkpụkpọ maka music echekwara na anyị ngwaọrụ.
Vidio egwu 10 kacha egwuri egwu na YouTube Spain na 2020
N'isiokwu m gara aga, egosila m gị nke bụ vidiyo 10 ndị nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke echiche n'oge 2020 na ...
Akụkọ sitere na mgbasa ozi mgbasa ozi nwekwara ike ime ka ọ bụrụ Spotify
Music gụgharia ọrụ Spotify amalitela ịnwale Akụkọ na ụdị nke Instagram, Facebook, na ndị ọzọ.
GeForce Ugbu a nkwanye egwuregwu ọrụ ga-arụ ọrụ site na ihe nchọgharị Chrome
Igwe okwu igwe ojii nke NVIDIA na-agba ọsọ na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ na ụdị Chrome dị iche nke ngwa ahụ
'Casa del Flamenco' bu uzo ohuru nke Spotify maka egwu ndi mepere emepe, egwu ndi nwanyi na ndi ozo
Oghere pụrụ iche na Spotify ebe anyị nwere ike ịchọta listi ọkpụkpọ 11 maka ọtụtụ kpochapụwo ma ọ bụ avant-garde flamenco.
Tupu ịmalite ya na Latin America, Disney + karịrị ndị debanyere aha 70 nde
Otu afọ mgbe emechara ya, Disney + nwere ndị ọrụ karịrị nde 70 ndị debanyere aha na-agụghị Latin America.
Ahịa Disney Plus na Latin America
Na November 17, Disney + ga-abata na Latin America wee nwee ike ijigide ndị ọrụ, ọ bupụtala ọrụ mmalite nke na-enye anyị ohere ịchekwa ụgwọ 4 kwa ọnwa
Xiaomi Mi Pai: Otu okike Chromecast nke na-achọghị njikọ Internetntanetị
Xiaomi ekwuputala Mi Pai, ngwaọrụ dị ka klọọkụ Chromecast na achọghị njikọ Internetntanetị. Nkọwa niile ebe a.
Youtube maka gam akporo bu ihe ohuru ohuru ohuru na mmeghari ohuru
Chọpụta ihe ngosipụta ọhụụ ị nwere ike iji na YouTube ọhụụ yana ị ga-etinye na mkpanaka gị na ụbọchị gị kwa ụbọchị.
Chromecast ọhụrụ ahụ na-agbakwụnye akara ntanetị
Ọgbọ nke anọ nke Chromecast gụnyere atụmatụ abụọ dị mkpa dị mkpa: njikwa ntanetị na Google TV dị ka sistemụ arụmọrụ.
Spotify na-ebuputa pọdkastị ọhụrụ maka Patria, usoro TV
A na-ewepụta isi abụọ na pọdkastị Patria nke Spotify na HBO Spain njikọ aka ịgbaso mmalite nke usoro TV.
Oge iji zute ndị na-ese ihe ọhụụ na 'Radar' na Spotify na ndepụta ọkpụkpọ 14 ya
10 ndị na-ese ihe na Spanish na-ezukọ na oghere Spotify Radar, oghere dị n'ime ngwa iji zute ndị na-ese egwu ọhụụ.
Ọrụ egwu egwu gụgharia ohuru na HD si Amazon. Gbalịa ya n'efu ụbọchị 90
Amazon na-ahapụ anyị ka anyị nwalee ọrụ ọhụụ ọhụụ ya na-akwụ ụgwọ n'efu n'efu ụbọchị 90
'Ihe kachasị amasị m ruo mgbe ebighi ebi' bụ ihe ọhụrụ site na Spotify ịkọrọ egwu na pọdkastị kachasị amasị gị
E wezụga inwe ike ịhọrọ 5 ọkacha mmasị songs maka "My Ebighị Ebi ọkacha mmasị", ị nwekwara ike họrọ XNUMX maka Spotify pọdkastị.
Spotify ga-emelite ya na ọnọdụ Karaoke, nnọkọ otu, playback na-anọghị n'ịntanetị maka ndị ọrụ n'efu na ndị ọzọ
Anyị na-ege ntị na akụkọ niile na-echere anyị na ngwa egwu egwu egwu kachasị amasị anyị: Spotify.
Esi lelee usoro n'efu na ihe nkiri na Netflix n'ụzọ iwu
The free version of Netflix dị ugbu a na Spain, na-enwechaghị ọdịnaya ma usoro na fim.
Ndị a bụ abụ a na-ege ntị na pọdkastị nke oge okpomọkụ na Spotify
Ndị na-ese ihe na Spanish na mba ụwa na-ezukọta n’oge okpomọkụ a na ọtụtụ nde mmeputakwa na Spotify. Echefula pọdkastị.
Disney + ga-abata na Latin America na November 17
Na November 17, ọrụ vidiyo gụgharia nke Disney ga-ada na Latin America.
Disney + ruru nde ndị debanyere aha 57 wee kwupụta ọbịbịa ya na Latin America
Disney ekwuputala na ọrụ vidiyo ya na-asọba ga-abata na Latin America na Nọvemba nke afọ a, na-enweghị ịkọwapụta otu ụbọchị.
Apple Music maka gam akporo na-agbakwunye nkwado maka enweghị ọkpụkpọ egwu
Mmelite kachasị ọhụrụ nke ngwa Apple Music maka gam akporo, na-enye gị ohere igwu egwu na-ewepu nkwụsịtụ n'etiti ha.
Ndị a bụ abụ ndị ga-ada ụda n'oge okpomọkụ a dịka Spotify si kwuo
Na enweghị ụkọ egwu iji mee ka ahụ ndị ahụ na egwu ndị ga-ada ụda n'oge okpomọkụ a dị ka Spotify si eme ka anyị mara.
Spotify kwụsịrị 10.000 song ịgba
Spotify bụ taa, ma eleghị anya maka afọ ole na ole sochirinụ, ọrụ egwu egwu kachasị ewu ewu ...
Nwee Amazon Music Unlimited maka ọnwa 3 n’efu
Ọnwa 3 anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ nkwanye egwu Amazon na-akwụ n'efu
Netflix malitere iwepụ mmachi ọ nyere na Europe n'oge ọrịa a na-efe efe
Netflix ekwenyela na ọ bidola iwepu mgbochi etinyere n'oge ọrịa a na-ebelata bandwit n'ofe Europe
Anyị na-agwa gị nke bụ ngwa kachasị mma ga - enyere gị aka ilele TV n'efu, ọbụlagodi ụgwọ-kwa-ele ma ọ bụ ppv TV, DTT, egwuregwu, ihe nkiri na ihe ndị ọzọ!
Chọpụta ngwa dị mma karịa Netflix na nweere onwe ya ikiri ihe nkiri kacha mma na usoro na ekwentị ma ọ bụ TV
Disney + ruru ndebanye ndebanye 50
Ọ bụ nnọọ eziokwu na premiere nke Disney + emeela ọtụtụ atụmanya na Europe. Olu na ogo ...
Netflix ugbu a na-enye njikwa ndị nne na nna maka ezinụlọ, anyị na-akụziri gị otu esi eji ya
Netflix ekpebiela ịhapụ mmelite ndị nne na nna maka ezinụlọ. Taa anyị na-akụziri gị ka ị jiri ya zuru oke.
Netflix na-akwado Bixby ugbu a, onye enyemaka Samsung
Netflix bụ taa onye ndu na gụgharia vidiyo vidiyo, ngalaba nke na-adịbeghị anya…
Amazon na-arụ ọrụ na egwuregwu na-agba ọsọ n'elu ikpo okwu iji merie Stadia: a ga-akpọ ya Project Tempo
Amazon na-etolite ọrụ ndenye aha maka egwuregwu igwe ojii iji mesoo Google's Stadia. A ga-akpọ ya Project Tempo.
Amazon Prime Video na-enye ọrụ ya n'efu maka otu ọnwa na ndebanye aha dị mfe. Nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya ya niile, ihe nkiri, usoro ...
Ndị ọkà okwu kacha mma inye na ụbọchị Nna
Anyị na-anakọta ndị ọkà okwu kachasị mma ị nwere ike ịnweta na Amazon na ndepụta ka ị nwee ike ịhọrọ nke ị ga-enye n'ụbọchị Nna.
Ọrụ gụgharia egwu na-ewebata ego maka ụlọ ọrụ ndekọ karịa ahịa dijitalụ na nke anụ ahụ
Ọrụ gụgharia egwu abụrụla isi ihe nweta ego maka ụlọ ọrụ ndekọ
Spotify ruru ndị debanyere aha nde 125
Onu ogugu ndi debanyere aha ha na Spotify, guzoro na 31 nde na Disemba 125, onu ogugu ndi n’etinye ya nke oma karia ndi ozo nke egwu egwu ghari
Gịnị bụ Hatch, egwuregwu gụgharia ngwa maka gam akporo nwere ihe karịrị egwuregwu 150
Nke a bụ egwuregwu gụgharia ọrụ nke Arkanoid Rising pụtara na nke Hatch na-akpali ọtụtụ ịnwale ikpo okwu ya.
Spotify Kidsmụaka, na-egwu egwu maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ
Ifymụaka Spotify bịarutere, na-egwu egwu maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ, ugbu a site na akaụntụ onye ọrụ gị n'okpuru nzacha nlekọta.
Spotify foduru Eze nke Music gụgharia na 113 Nde kwụrụ ndị debanyere aha
Ọrụ Swedish gụgharia ọrụ Spotify agafeela olile anya uto niile ọ nwere maka nkeji nke atọ nke 2019, ọbụnadị karịa ndị nyocha
Waze akwadola egwu egwu egwu ọzọ
Chọpụta karịa nkwado na ndakọrịta n'etiti Waze na TIDAL nke emere ka ọ bụrụ nke gọọmentị ma nye gị ohere ige egwu na ngwa igodo.
Netflix ga-enye gị ohere ịgbanwe ọsọ playback na gam akporo
Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ a ga-ewebata na Netflix maka gam akporo nke ga-enye gị ohere ịgbanwe ọsọ nke ọkpụkpọ ọdịnaya.
Netflix ga-ebido atụmatụ mkpanaka ya na mba ndị ọzọ
Chọpụta karịa banyere atụmatụ Netflix ịmepụta atụmatụ a maka smartphones ha nwere na India n'ahịa ọhụrụ n'ihi nsonaazụ ọma ya.
Google Stadia na-abịa gam akporo TV na 2020
Chọpụta ihe banyere atụmatụ iji jikọta Google Stadia na gam akporo TV na 2020, dị ka ekwenyelarị na iwu.
Netflix Mmelite Ndepụta nke HDR10 ekwentị dakọtara
Chọpụta ndepụta zuru ezu nke igwe eji arụ ọrụ nke dakọtara na ọnọdụ HDR10 na Netflix dị ka ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara.
Ọhụrụ Spotify wijetị na-enye ohere ụfọdụ nhazi ndị ọzọ ma weta ya ọhụụ ọhụrụ iji mee ka oge egwu gị bụrụ nke kacha mma.
Egwu Google Play na-akwado iji sị ọfụma n'ahịa
Chọpụta ihe banyere ohere na Google Play Music ga-ejedebe na-asị goodbye na ahịa na ọnwa ole na ole na-adịgide adịgide.
Spotify na-ewepu wijetị iji chịkwaa egwu egwu egwu mgbe nwelite ikpeazụ
Mmelite kachasị ọhụrụ nke ngwa Spotify akwụsịla tinyere wijetị iji jikwaa egwu site na ihuenyo ụlọ anyị.
Spotify nwere ike ibulite ọnụ ahịa ya na mba ụfọdụ
Chọpụta karịa gbasara atụmatụ Spotify iji bulie ọnụahịa ụfọdụ ọnụego ha na ahịa ahọpụtara n’oge na-adịghị anya.
Amazon Prime Video dị ugbu a na Chromecast
Chọpụta karịa banyere ndakọrịta n'etiti Amazon Prime Video na Chromecast nke emesịrị mee ka ọ bụrụ ọkwa dịka ụlọ ọrụ kwupụtara.
Esi lelee FC Barcelona VS Chelsea n'efu n'ebe ọ bụla n'ụwa
Chọrọ ịhụ FC Barcelona VS Chelsea n'efu site na ebe ọ bụla n'ụwa? Ọ bụrụ na azịza nye ajụjụ a ...
Netflix ga-ebido usoro ntinye aka na ahịa ụfọdụ
Chọpụta ihe banyere atụmatụ ndenye aha nke Netflix na-ebupụta na India maka naanị maka ekwentị na nke ahụ na-abịa na mba ndị a ọnwa.
Ọ bara uru nbudata Spotify Lite?
Chọpụta karịa gbasara ntụnyere a n'etiti Spotify Lite na Spotify iji mara ma ọ bara uru ibudata ngwa ọhụụ a na gam akporo.
Nwee Amazon Music Unlimited maka ọnwa 4 maka naanị 1 euro
Amazon na-enye anyị onyinye ọnwa 4 nke Amazon Music Unlimited maka naanị 0,99 euro.
Etu esi ebudata pọdkastị site na Spotify na ekwentị gị
Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji nwee ike ibudata Podcast na ekwentị gam akporo gị ma nwee ike ịge ya n'oge ọ bụla.
Plex maka gam akporo ugbu a na-akwado ọrụ PiP (Foto dị na Foto)
Ihe PiP (Foto dị na Foto) dị ugbu a na mmelite Plex kacha ọhụrụ.
Spotify ga-enye gị ohere isoro ndị enyi kerịta egwu wee gee ya ntị n'otu oge
Choputa ihe banyere oru nke gha enyere anyi aka isoro ndi otu ndi enyi kesaa egwu na Spotify, nke di na uzo nnwale.
Netflix na-emelite ndepụta nke ekwentị ndị dakọtara na HD na HDR
Chọpụta ihe banyere ọhụrụ ndepụta nke gam akporo igwe na-dakọtara na HD na HDR na Netflix ngwa na gam akporo.
Spotify na-anwale ude olu na ngwa ahụ
Chọpụta karịa gbasara ule mbụ nke Spotify na nkwupụta okwu nke a ga-ewebata na ngwa gị n'ime ọnwa ole na ole.
Chọpụta ihe banyere ọrụ igwe ojii na-egwu egwu nke Samsung nwere ike ịmalite n'afọ a, dị ka usoro mgbasa ozi dị iche iche kwuru.
Spotify enweworị ndị debanyere aha 100 nde gbasaa gburugburu ụwa
Ọrụ egwu gụgharia nke Spotify eruola nde 100 na-akwụ ụgwọ ndị debanyere aha gburugburu ụwa.
Etu esi egwu Audio na vidiyo n’etiti Ngwaọrụ gam akporo
Video-post nke m na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ụzọ kachasị mma iji bulie ọdịyo na vidiyo n'etiti ngwaọrụ gam akporo.
Kedu ihe bụ Canvases Spotify na gịnị ka ha bụ maka?
Chọpụta ihe banyere Spotify Canvases, site na ihe ha bụ, otu ha si arụ ọrụ na otu ị ga-esi gbanyụọ ha na ngwa ahụ.
Netflix na-anwale ndenye aha kwa izu
Chọpụta ihe banyere atụmatụ ịkwụ ụgwọ ọhụrụ nke Netflix, nke na-anwale ndebanye aha kwa izu na India na-abịa n'isi nso.
Ihe ndi ozo di nma na Diskokosmiko
Chọpụta ụzọ ndị ọzọ dị mma iji tụlee ma ọ bụ budata ụdị ọdịnaya niile dị mfe na Diskokosmiko.
Spotify ga - eme ka ị ghara igbochi ndị na - ese ihe ihe ọhụụ
Igodo mkpọchi bụ atụmatụ ndị ọrụ Spotify rịọrọ nke ukwuu, nke ga-enye gị ohere igbachi egwu onye na-ese egwu. Nke a ka ga-abịa.
Etu esi etinye Stingray Music, uzo di nma nke Spotify, n’efu ma n’enweghi mgbasa ozi
Vidiyo nkuzi nke m na-egosi gị otu esi etinye Stingray Music, ihe ọzọ na Spotify maka n'efu na enweghị mgbasa ozi na-adịghị na mpaghara Spanish.
Nke a bụ ihe kacha mma ngwa nke oge iji gee egwu na nkwanye ma ọ bụ ibudata ya
Ngwa dị egwu nke ga - enyere anyị aka ige egwu na ntanetị na ibudata, ha niile sitere na interface njirimara dị egwu.
Atlas nke oru ngo, igwe ojii igwe ojii nke EA maka egwuregwu mkpanaka
EA na-arụ ọrụ na Project Atlas, ihe egwuregwu na-egwu egwu nke ga-enye anyị ohere iji egwuregwu AAA ugboro atọ na ngwaọrụ na-enweghị ọtụtụ akụrụngwa.
[APK] MegaDeDe, anyị na-egosi gị otu ị ga-esi nweta ezigbo ihe ọzọ na PlusDeDe
Egwuregwu egwu egwu egwu Tidal ebubo nke ịgbagha data
Ọrụ egwu na-asọba na Tidal na-eche nsogbu dị iche iche na ụfọdụ ndị omenkà ya, n'ihi ọnụ ọgụgụ a na-ebuwanye ibu.
Telegram 4.8 rutere na akụkọ dịka nkwanye
Telegram 4.8 na-ọkọnọ na ọtụtụ ihe dị mkpa ozi ọma. Chọpụta karịa gbasara mmelite nke ngwa izipu ozi nke mere ka anyị were akụkọ dị iche iche.
Na ọkwa ọhụrụ a, m ga - akwado ngwa dị egwu maka gam akporo, ngwa iji lelee ọdịnaya ntanetị ...
Chọpụta otu esi ekiri ọwa akwụrụ ụgwọ si n’akụkụ ụwa niile site na mkpanaka ma ọ bụ mbadamba gam akporo gị site na nbudata App dị mfe n'efu.
Etu ị ga - esi nweta Wiseplay ohuru ma wụnye ha ka ị ga - enwe ọ TVụ TV na - akwụ ụgwọ ọ bụla n’efu na ntanetị anyị
Chọpụta MOBDRO maka gam akporo, ngwa iji lelee TV na gam akporo nke na - enye gị ohere ịlele ọwa akwụ ụgwọ n'efu na gam akporo ma ọ bụ Chromecast.
Google na-ekwuwapụta YouTube TV, igwe onyonyo TV ya ọhụụ
Google na-ekwuwapụta YouTube TV ya na-agbasa ozi telivishọn maka $ 35 kwa ọnwa nke na-amalite na United States na njedebe nke 2017
Anyị na-egosi gị ngwa anọ kachasị mma iji gee egwu egwu na-egwu egwu
OS anyị na-egosi ma tinye ihu na ihu maka ngwa anọ kachasị mma iji gee egwu na gụgharia, abụọ nwere nhọrọ ige ntị n'efu na abụọ na ịkwụ ụgwọ.
O doro anya na nke a bụ ngwa kachasị mma nke oge iji lelee TV n'efu, ma ha bụ ọwa mepere emepe, na-akwụ ụgwọ ọwa na ọbụna ọwa ndị toro eto.
Prince dị ugbu a na Google Play Music na ọrụ ndị ọzọ gụgharia
Dika ekwuru na mbu maka izu gara aga, otutu akwukwo ndi ozo ...
Facebook na-arụ ọrụ na ngwa ọhụrụ maka ihe ngosi egwu
Facebook chọrọ ịsọ mpi megide nnukwu vidiyo na nyiwe nkwanye yana ngwa ọhụrụ elebara anya na 10 nkeji-dị ka TV
Site na nnweta a, Plex sonye na ọrụ vidiyo gụgharia maka akụkọ ozi nke Watchup na-enye ogologo oge. Nnweta nnweta.
Twitter ka emelitere ka ị nwee ike igbanye ndụ na-enweghị etinye ngwa Periscope arụnyere. Nnukwu ihe ọhụụ maka ngwa ahụ.
WhatsApp na-anwale ihe nyocha na vidiyo vidiyo
WhatsApp na-anwale vidio vidio na-egosi na nnwale na India ka e wee budata ọtụtụ vidiyo na ebe nchekwa ekwentị.
Esi lelee bọọlụ n'efu na ọwa TV niile na Spain ỌR WOR ỌR !! !!
Taa, anyị gosipụtara gị ngwa kacha mma iji lelee bọọlụ n'efu, ngwa nke na-arụ ọrụ zuru oke ma ọbụnadị na-enye anyị ohere ilele ọwa mgbakwunye n'efu.
Chromecast Ultra na 4k na-asọba na ego nke € 79
Google gosiputara Chromecast Ultra 4K nke nwere ike igbanye ọdịnaya na ogo a site na ọrụ dịka YouTube ma ọ bụ smartphones
Soro ndụ gụgharia nke mmemme Google na ngosipụta nke Google Pixel na ọtụtụ ndị ọzọ
Ihe omume Google ga-amalite na 18: 00 pm (oge Spanish) na nke a ga-ewepụta ọtụtụ ngwaahịa nwere mmasị dị ukwuu.
Nwere ike ịkwanye ngwa gam akporo na Facebook Live na Bluestacks
BlueStacks agbakwunyela ngwaọrụ nke na-enye gị ohere ịkwanye ngwa gam akporo na Facebook Live. Nnukwu ihe ọhụụ maka ndị iyi.
Ọrụ gụgharia egwu Amazon nwere ike ịbụ $ 5 kwa ọnwa maka ndị ọrụ Echo
Amazon chọrọ ịbanye n'ahịa siri ike nke egwu egwu na Echo ngwaọrụ ya na ugwo nke $ 5 iji nweta egwu kacha mma.
Egwuregwu vidio vidio 4 na-abụghị Twitch
Twitch bụ ngwa ezigbo mma maka ịgbanye egwuregwu vidio na oge, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị.
Ngwa YouTube ga-enye ohere ị nweta nkwanye ndụ
YouTube dị n'ụgbọ oloko nke gụgharia na ozugbo ma n'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ịgbasa ozi ka e wee chekwaa vidiyo ahụ na akaụntụ gị.
Site na nkuzi a na Kodi ị ga-ama ihe nzuzo niile iji mee ka ọtụtụ ohere kachasị mma nke kacha mma gam akporo multimedia player
Tumblr na-akwadebe ịnye vidiyo vidiyo na-aga n'ihu
Tumblr bụ ọrụ ọzọ na-agbakwunye na usoro nke ugbu a nke pụtara ịde vidiyo na oge na nke anyị hụrụ Periscope
Amazon dị njikere iji malite ya online music gụgharia ọrụ
Amazon fọrọ nke nta ka ọ dị njikere na ọrụ ntanetị egwu ya n'ịntanetị nke ga-abata na ngwụsị oge ọkọchị ma ọ bụ mmalite ọdịda.
Periscope na-echekwa iyi gị ozugbo na-akpaghị aka
Periscope na-enye ohere site taa ka ọ na-akpaghị aka ịchekwa mgbasa ozi niile ị na-eme na akaụntụ gị ruo mgbe ebighị ebi.
Facebook Live na-enweta 24-hour ozugbo na-agbagharị
Facebook Live ga - ejikọ mgbasa ozi 24 awa dị ka nnukwu ihe ọhụụ maka izu ndị na - abịanụ na nke ahụ ga - enwe ihe dị iche iche.
Periscope ga - enweta nyocha maka mgbasa ozi na - esi na drones na - ebubata
Periscope ga-agụnye atụmatụ ndị ọzọ ọhụrụ na mmelite kachasị nke ga-agụnye ọchụchọ maka mgbasa ozi na ike iji drones maka iyi egwu.
Periscope na - enye gị ohere ịchekwaa vidiyo vidio gị
Vidio ndị mepụtara na ozugbo site na Periscope nwere ike ịchekwa dị ka nhọrọ maka onye okike ọdịnaya.
Ndị ọrụ Twitch nwere ike ịfegharị egwuregwu vidio gam akporo na PC ha
Ndị ọrụ Twitch nwere nnukwu nsogbu na enweghị ike ịkwanye na ekwentị, yabụ Bluestacks na-abịa nyere ha aka.
Ihe egwuregwu vidiyo kacha mma nke 5 kacha mma maka gam akporo
Ngwa ise ga - eme ka ị bụrụ onye ama ama n’afọ ma ọ bụrụ na ị nwee nnọgidesi ike, nka na egwuregwu nkwukọrịta
YouTube Gaming emelitere na a raara onwe ya nye gụgharia taabụ, mmapụta video ọkpụkpọ na ndị ọzọ
YouTube Gaming a na-emelite na a usoro nke ọhụrụ atụmatụ iji gaa na akaụntụ dị ka sere n'elu video ọkpụkpọ na ndị ọzọ
Kamcord abịawo ụzọ maka ndị iyi iji nweta ego site na onyinye sitere na ndị Fans.
Digitally Imported Radio bụ otu n'ime ihe kachasị mma egwu egwu elektrọnik nke oge a
Digitally Imported Radio bụ nanị ngwa maka gụgharia electronic music nke nwere nnukwu interface na ihe karịrị 90 ọwa
Ngwa egwu gụgharia SomaFM ghọrọ n'efu
SomaFM bụ kọmputa na indie music ọrụ na aghọwo ya ngwa n'ihi na free na gam akporo
Igwefoto GoPro jikọtara na Periscope ugbu a maka ịmegharị ndụ
GoPro na - enweta akara dị mma site na ikwupụta nkwado maka Periscope, agbanyeghị na anyị ka ga - eche ka ọ rute na gam akporo
Spotify dị njikere ịmalite vidiyo na pọdkastị na gam akporo
Spotify chọrọ ijikọta ọrụ ndị ọzọ na mwepụta nke Spotify Ugbu a iji weta vidiyo na pọdkastị nye ọtụtụ nde ndị ọrụ ya
Kamcord ugbu a na-enye ohere ka ndị ọrụ gam akporo niile banye na ezigbo oge site na ekwentị ha
Kamcord na mmelite ohuru na - enye onye ọrụ ọ bụla ohere iji ekwentị ha na - egwu egwuregwu ha n’oge.
Facebook na-elele Periscope wee malite vidio vidio na ezigbo oge na netwọkụ mmekọrịta ya
Facebook atụgharịrị na Periscope iji weta nnukwu njirimara ya, dị ka vidio vidio na oge, na netwọkụ mmekọrịta ya.
Opera Max ga - echekwa data mgbe ị na - eji egwu egwu egwu egwu dịka egwu YouTube
Nchọpụta data ga-enye gị ohere ịchekwaa 50% nke ndị egwu egwu dị ka YouTube Music adịworị na Opera Max
NVIDIA's GeForce UGBU Egwuregwu Gụgharia Platform Ugbu A Dị
NVIDIA ka malitere usoro GeForce UGBU A na egwuregwu 70 iji nwee ọ gamingụ egwuregwu kachasị mma site na SHIELD console gị.
[APK] Egwuregwu egwu na-akwadebe iji tinye ndekọ ihuenyo na gụgharia na YouTube Gaming
Ngwa egwuregwu Google Play dị ka ọ bụ onye ga - ejikwa iyi egwu ga - enwe ike ile ha ma emechaa site na YouTube Gaming.
N'oge na-adịghị ị ga-enwe ike enuba gị gam akporo video egwuregwu na YouTube
YouTube ga - eweta n’oge na - adịghị anya iji sụgharịa egwuregwu n’ezie site na ọrụ ya maka Android smartphones na mbadamba
Periscope na-enweta nkwado maka ịgba ọsọ na ezigbo oge na usoro ọdịdị ala
Periscope ewebatala ikike ịgbasa vidiyo na usoro dị larịị na-eme ka o kwe omume iji nhọrọ a ma ọ bụ ihe ga-abụ nke kwụ ọtọ.
Chromecast bụ nke abụọ kachasị ere gụgharia na US
Google's Chromecast ngwaọrụ bụ nnukwu nsogbu na United States, na-aghọ ngwaọrụ nke abụọ kachasị ere.
Mara ma jiri Periscope, ihe eji eme ugbu a na-agba ọsọ
Periscope bụ otu n'ime ọnọdụ gburugburu ụwa ugbu a maka ịmegharị oge. Ngwa nwere njikọ chiri anya na Twitter.
Motorola gụgharia ihe omume maka July 28, 2015. Gini ka ichoro inye anyi?
Taa, anyị nwetara nkwenye gọọmentị maka ihe omume Motorola gụgharia ọzọ maka July 28, 2015 na 15: XNUMX elekere.
Live Screen Streaming, ngwa Sony ka ị gha egwu egwuregwu gị na Twitch na YouTube
Twitch ma ọ bụ YouTube bụ nyiwe abụọ ebe ị nwere ike ilele egwuregwu gụgharia sitere na Live Screen Streaming.
AC / DC dị ugbu a site na egwu egwu egwu dịka Play Music na Spotify
AC / DC gafere n'ọtụtụ ọrụ egwu egwu, gụnyere Play Music na Spotify. Dị nnọọ ihe omume maka egwu.
CloudPlayer na-egwu egwu gị site na Dropbox, OneDrive na Google Drive
CloudPlayer bụ ihe na-adọrọ mmasị na-adọrọ mmasị iji zụlite egwu gị site na Dropbox, OneDrive na Google Drive
Line na-ebupụta ụgwọ ọrụ egwu ya na-akwụ ụgwọ na Japan
Egwu Line bụ nzọ nke ọrụ izi ozi n'ịntanetị ama ama nke amalitegoro taa na Japan.
Otu esi eso ndu ogbako nke Google I / O 2015 na-asọba na 18,30 pm (oge Spanish)
N'okpuru ebe anyị na-enye gị ohere ozugbo maka isi mmalite nke Google I / O 2015 na Streaming.
Periscope gụgharia ngwa dị ugbu a na gam akporo
Ngwa maka ndụ gụgharia Periscope dị ugbu a na gam akporo iji merie Meerkat, ngwa ọzọ nke ụdị ya.
MixRadio, ọrụ nkwanye egwu egwu ama ama dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play
MixRadio dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play iji nweta egwu kachasị mma site na ọrụ nkwanye a
3 ngwa na nke na-enwe nkwanye music na gam akporo
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụ ụtọ egwu dị na gam akporo na-enweghị ibudata ihe ọ bụla na ọnụ gị, taa anyị na-agwa gị ngwa atọ iji nwee ọ streamingụ nkwanye.
Ntuziaka doro anya na fim na usoro ntanetị site na PC gaa gam akporo
Anyị na-egosi gị otu esi enubata ọdịnaya multimedia na PC na gam akporo na nkeji 5
Etu esi egwu egwu na ngwaọrụ gam akporo?
Ọ bụrụ na ị na-eche otú ị ga-esi nweta ọtụtụ ihe na ọnụahịa gam akporo gị na egwu, taa ana m akọwa otu esi ege ntị na egwu egwu na ngwaọrụ gam akporo.
Ngwa AllCast gụgharia dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play
Koush eweputala AllCast na Playlọ Ahịa Play. Ngwa nkwanye sitere na beta ma dị ugbu a maka nbudata.
Google Drive na - enye gị ohere igwu vidiyo site na nkwanye
A na-emelite ọrụ nchekwa igwe ojii Google Drive ma na-egwu vidiyo ugbu a site na nkwanye
Play.fm-abịa na gam akporo ya gụgharia playback ngwa
Ugbu a ọ bụ oge ikwu okwu banyere ngwa gam akporo nke ebe nrụọrụ weebụ Play.fm, nke akpọrọ aha ya, nke dịlarị na Ahịa gam akporo maka nbudata